1 Nyefee iTunes Files
1.1 iPad ka iTunes
1.2 iPhone ka iTunes
1.3 iTunes ka New Computer
1.4 Video ka iTunes
1.5 Podcast si iPhone ka iTunes
1.6 iTunes Music ka Flash Drive
1.7 Flash Drive Music ka iTunes
1.8 Google Music ka iTunes
1.9 Non zụrụ Music ka iTunes
1.10 Draịvụ Music ka iTunes
1.11 Spotify Music ka iTunes
1,12 YouTube Music ka iTunes
1,13 YouTube Video ka iTunes
1,14 Torrent ka iTunes
1,15 Rhapsody ka iTunes
1,16 Pandora ka iTunes
1,17 iTunes Music ka Computer
1,18 iTunes Music ka Nexus
1,19 iPod ịkpọgharịa Music ka iTunes
1.20 iTunes Music ka iPhone
1,21 iPod Touch Music ka iTunes
1,22 iPod Nano Music ka iTunes
1,23 iPod Omuma Music ka iTunes
1,24 DivX ka iTunes
2 iTunes maka Android
2.1 iTunes maka Android
2.2 iTunes ka Android
Ma gụọ 2.3 Music si gam akporo ka iTunes
2.4 Music si iTunes ka Android
2.5 iTunes Music ka Samsung
2.6 iTunes Music ka HTC
2.7 iTunes Radio na-Android
2.8 iTunes Iru Android
3.1 Playlist n'efu efu
3.2 Playlist ka iPod
3.3 Playlist ka iPhone
3.7 Playlist ebe
3.8 iTunes na Smart Playlist
3.9 listi ọkpụkpọ iji Draịvụ
4.1 iTunes Library okụrede
4.2 belata gị iTunes Library
4.3 Idozi iTunes Library
4.4 Tụlee iTunes Library
5 Play na iTunes
5.1 MP4 ka iTunes
5.2 Play WMV na iTunes
5.3 M4V ka iTunes
5.4 WAV ka iTunes
5.5 MOV ka iTunes
5.6 Flv ka iTunes
6 iTunes mmekọrịta Nsogbu
6.1 agaghị mmekọrịta iPod na iTunes
6.2 agaghị mmekọrịta iPhone na iTunes
7 Atụmatụ & Aghụghọ
7.1 Alternatives maka iTunes
7.2 Mee iTunes Faster
7.3 Ngosipụta Song Lyrics
7.5 Watch iTunes nkiri na TV
7.7 Wepụ Duplicates na iTunes
7.8 Tag Songs na iTunes
7.9 Tinye Metadata na iTunes
7,10 iTunes Lyrics Wijetị maka Mac
7,11 Import Multiple Lyrics ka iTunes
7,12 Import iTunes ka Winamp
7.13 ịgbanwe iTunes Skin
7,15 iTunes Ụra Ngụoge
7,16 iTunes Home Ịkekọrịta
7,17 ịgbanwe EPUB Cover site iTunes
8 iTunes ndabere & Naghachi
8.1 View iTunes ndabere
8.2 wepụ iTunes ndabere
8.3 Naghachi Lost iTunes Music
Google Nexus 5 bụ nke mbụ Android smartphone kwadoro site na Android 4.4, KitKat. Ọ bụ aka-free na olu omume. Mgbe ọ bụla ị chọrọ ka izipu ozi, ga-esi ntụziaka, chọta ihe oyiyi na ihe ọzọ, i nwere ike dị na-ekwu "Ok, Google". Olee otú adaba ọ bụ! Ọ bụrụ na ị dị nnọọ okporo mmiri gị ochie iPhone ma zụta nke onwunwu ekwentị, na echekwara nza nke songs na listi ọkpụkpọ na iTunes, eleghị anya ị gaghị na-eche nyefee ha gị Nexus 5.
Ọtụtụ smartphones ike ga-eji dị ukwuu obere music Player, dị ka jụụ Samsung Galaxy Series. Ọ bụrụ na ị nwere otu onye nke ha, na-ekwu, Galaxy S5, Ohere inweta bụ ị chọrọ nyefee music si iTunes ya n'ihi ntụrụndụ n'oge ọ bụla na n'ebe ọ bụla. Ma, ị maara otú? Isiokwu a na-elekwasị anya na-egosi gị 3 mfe ụzọ na otú nyefee music si iTunes ka Samsung Galaxy usoro. Nke ụzọ ga-abụ ọkacha mmasị gị otu?
Method 1. Iji Wondershare TunesGo nyefee iTunes music ka Samsung Galaxy Series
Method 2. Iji Samsung Kies ka Download Music si iTunes ka Samsung Galaxy S5 / S4 / S3 / S2 / S
Method 3. Chọta iTunes Media nchekwa na Copy iTunes Music ka Samsung Galaxy S4 / S5 / S3 / S2 / S
Tụlee ihe 3 Ụzọ Karịsịa
Gịnị ma ọ bụrụ na ị chọrọ nyefee listi ọkpụkpọ nakwa dị ka music si iTunes ka Samsung Galaxy S3 / S5 / S4 / S2 / S? Gịnị ma ọ bụrụ na ị chọrọ nyefee music si Samsung Galaxy ka iTunes? M nwere ike ikwu a dị ike iTunes maka Samsung mbadamba na ekwentị software maka gị. Ọ bụ Wondershare TunesGo (Mac) ma ọ bụ Wondershare TunesGo (Win) bụ nri software maka gị. Ọ na-enye gị ike nyefee iTunes music, listi ọkpụkpọ, fim, iTunes U, pọdkastị-egosi na TV ka Samsung Galaxy ke kiet ke otu click. Ebe a bụ otú o si arụ ọrụ. Dị na-agụ na.
Get nkọwa ndị ọzọ banyere esi ndị a songs >>
Nzọụkwụ 1. Jikọọ Samsung Galaxy ngwaọrụ Mac ma ọ bụ PC-agba ọsọ ahụ software. Mgbe ghọtara, gị Samsung Galaxy ngwaọrụ uche na-egosi na mgbe ya bụ isi window.
Nzọụkwụ 2.-emekarị, iTunes ga-agba ọsọ na-akpaghị aka. Ọ bụrụ na, na-agba ya onwe gị.
Nzọụkwụ 3. Pịa mmekọrịta taabụ. Tinye akà rà ma Niile n'ọbá akwụkwọ ma ọ bụ họrọ listi ọkpụkpọ ka họrọ ihe ị chọrọ nyefee. Wee pịa mmekọrịta na-amalite nyefe. Mgbe ọ bụ zuru ezu, iTunes ọdịyo na video ga-adị gị Samsung ngwaọrụ.
Samsung Kies, mere site Samsung, ejisie photos, music, videos na ndị ọzọ na Samsung galaxy usoro site na kọmputa maka free. Ọ na-akpaghị aka syncs niile music si iTunes na ihe niile nchekwa na kọmputa na-Samsung Kies, na mgbe ị nwere ike nyefee ka Samsung Galaxy usoro. N'okpuru ebe bụ mfe nkuzi na otú ibudata music si iTunes ka Samsung Galaxy usoro site na iji Kies. Ebe ọ bụ na Windows na Mac version ọrụ n'ụzọ yiri nke ahụ, lee, m dị nnọọ na Mac version dị ka a na-agbalị.
Nzọụkwụ 1. Gaa Samsung ukara website ka ibudata Samsung Kies on Mac. Wụnye na-agba ya.
Nzọụkwụ 2. ikwunye na eriri USB jikọọ gị Samsung ngwaọrụ Mac. Ozugbo ahụrụ, gị Samsung ngwaọrụ ga-gosiri na ekpe sidebar nke Kies.
Nzọụkwụ 3. Mgbe n'elu akara, pịa File> Bubata iTunes listi ọkpụkpọ iji Library. Mgbe ahụ, n'okpuru Library ndekọ, pịa New Playlist. All music na iTunes ga-ahụ.
Nzọụkwụ 4. Tinye akà rà gị chọrọ songs na pịa Nyefee gaa na Ngwaọrụ.
Gịnị ma ọ bụrụ na ị chọrọ nyefee listi ọkpụkpọ nakwa dị ka music si iTunes ka Samsung Galaxy S3 / S5 / S4 / S2 / S? Gịnị ma ọ bụrụ na ị chọrọ nyefee music si Samsung Galaxy ka iTunes? M nwere ike ikwu a dị ike iTunes maka Samsung mbadamba na ekwentị software maka gị. Ọ bụ Wondershare TunesGo (Mac) bụ nri software maka gị. Ọ na-enye gị ike nyefee iTunes music, listi ọkpụkpọ, fim, iTunes U, pọdkastị-egosi na TV ka Samsung Galaxy ke kiet ke otu click. Ebe a bụ otú o si arụ ọrụ. Dị na-agụ na.
Chọrọ ịhụ a usoro idetuo iTunes music ka Samsung Galaxy ngwaọrụ enweghị ihe ọ bụla software? I nwere ike ịgbalị usoro a ma ọ bụrụ na ị nwere a Windows kọmputa. Ọ bụrụ na ị mgbe nne Mmetụta Copy faịlụ ka iTunes media nchekwa mgbe na-agbakwụnye na ọbá akwụkwọ iTunes, ị nwere ike mfe na-niile iTunes music on Windows kọmputa. Ihe niile ị chọrọ bụ ịchọta media nchekwa.
Site ndabara, iTunes media nchekwa a na-echekwa na:
Windows 8/7: C: \_ Ọrụ \_ aha njirimara \_ My Music \_ iTunes \_
Windows XP: C: \_ Documents na Mwube \_ aha njirimara \_ My Documents \_ My Music \_ iTunes \_
Windows Vista: C: \_ Ọrụ \_ aha njirimara \_ Music \_ iTunes \_
Nzọụkwụ 1. Gaa na iTunes media na nchekwa ma ị ga-ahụ a Music nchekwa. Emeghe ya na ị ga-ahụ ọtụtụ nchekwa aha ya bụ site artists. Songs na-echekwa ndị a nchekwa.
Nzọụkwụ 2. Jikọọ gị Samsung Galaxy ngwaọrụ Windows kọmputa. Mgbe na-ejikọrọ ọma, na-aga ahụ mpụga ike mbanye nke Samsung Galaxy ngwaọrụ na imeghe ya.
Nzọụkwụ 3. Go azụ iTunes music na nchekwa ma Detuo gị chọrọ songs ka Samsung Galaxy ngwaọrụ.
Ọ bụ a free usoro ime iTunes ka Samsung music nyefe. Ọ bụrụ na ị nwere ole na ole songs, ị pụrụ ime ya na gị onwe gị. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ narị puku ndị songs, ị ga-emeghe nza nke artist nchekwa na mbupụ songs site na ha. Olee otú tedious ọ bụ. Ka njọ, dị ka Kies, ọ nwere ike adịghị nyefee listi ọkpụkpọ ma.
Part 4. Tụlee ihe 3 Ụzọ Karịsịa
2. Wondershare TunesGo (Mac)
3. Chọta iTunes Media nchekwa na nyefee ka Samsung
Uru 1. Free;
2. Nyefee songs si iTunes ka Samsung Galaxy ngwaọrụ ahụ; 1. Nyefee songs, listi ọkpụkpọ na ndị ọzọ na media faịlụ site na iTunes ka Samsung Galaxy ngwaọrụ ahụ;
2. Nyefee Samsung Galaxy ka iTunes on Mac na 1 click;
3. Hichaa iTunes n'ọbá akwụkwọ tupu transfer, dị ka gwara ID 3 Ama na ihichapụ oyiri songs; 1. Free;
2. Ọ dịghị mkpa software;
3. Nyefee songs si iTunes ka Samsung Galaxy ngwaọrụ ahụ;
Cons 1. Ike nyefee iTunes listi ọkpụkpọ iji Samsung Galaxy ngwaọrụ ahụ;
2. Njikọ mbipụta; 1. ugwo; 1. Ike nyefee iTunes listi ọkpụkpọ iji Samsung Galaxy ngwaọrụ ahụ;
2. Naanị-arụ ọrụ na Windows kọmputa;
3 Ngwaọrụ Iji jikọọ Android ka Mac Mfe
Mmekọrịta ihe niile si Mac ka Android
Best 4 iTuens Alternatives maka Android
Nyefee iTunes Music ka Android Ngwaọrụ
Top 4 doubleTwist Alternatives
Best iTunes maka Android Software
Nyefee iTunes Music ka Nexus 5
Mmekọrịta Android na iTune Ịlụ Ihe ọ bụla
Nyefee Music si gam akporo ka iTunes
Top 3 SyncMate Alternatives
Nyefee iTunes Music ka Samsung
Nyefee Music si Mac ka Android
A zuru okè Alternative ka Android File Nyefee
Top 3 iSyncr Alternatives
Olee otú Download, Wụnye, Uninstall na Update Samsung Kies Mac
Olee otú Download, Wụnye, Uninstall na Update Samsung Kies on PC
Olee otú iji tọghata Torrent ka iTunes
Olee otú ndabere iTunes Playlist
4 Atụmatụ maka ndabere ọnọdụ nke iTunes 12 Ọ mkpa ka ị mara
Olee otú wughachi iTunes n'ọbá akwụkwọ
Olee otú iji hazie Your iTunes Library Ọma
Olee otú Download Google Music ka iTunes
> Resource> iTunes> 3 Ụzọ Nyefee Music si iTunes ka Samsung Galaxy S5 / S4 / S3 / S2 / S